Sintomy ny WhatsApp ho an'ny BlackBerry, alao eto | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp no ​​mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo indrindra, ary an-jatony tapitrisa izao ny mpampiasa azy eran'izao tontolo izao. Toy izany koa, BlackBerry dia nanjary iray amin'ireo mpanamboatra finday avo lenta, noho izany, Whatsapp ho an'ny Blackberry misy ihany koa. Ny fametrahana WhatsApp amin'ireo fitaovana madinidinika ireo miaraka amin'ny klavie fizika dia mora sy haingana toy ny amin'ny hafa rehetra, noho ny fanampiana lehibe omen'ny WhatsApp amin'ireo sehatra marobe, mba hahafahantsika misintona WhatsApp ho an'ny Blackberry amin'ny fomba tsotra indrindra avy amin'ny magazay manokana. Fampiharana.
1 Sintomy maimaim-poana ny WhatsApp ho an'ny BlackBerry
2 Maimaimpoana mandrakizay ve ny WhatsApp ho an'ny Blackberry?
Sintomy maimaim-poana ny WhatsApp ho an'ny BlackBerry
Avy amin'ny azy manokana World BlackBerry lasa mora kokoa ny zava-drehetra, miditra fotsiny isika LINK ary tsindrio ny bokotra misintona izay miseho eo akaikin'ny kisary fampiharana. Mangataka ny ID BlackBerry antsika izy, rehefa tafiditra, manomboka ny fisintomana, miandry fotsiny ny famaranana isika mba hirosoana amin'ny fametrahana azy.
Ireo fifandraisana dia haarahina mivantana amin'ny rindranasan'ny WhatsApp raha vantany vao vita ny fomba fametrahana sy fampidirana. Amin'ny dingana voalohany, toy ny mahazatra, ny fangatahana dia hangataka nomerao telefaona amintsika, tsy maintsy miditra isika mitovy ny laharana karatra SIM mampiasa izahay hanohizana ny kaody fampidirana. Raha vantany vao tafiditra, dia hangataka solonanarana sy sary mombamomba anay izy raha manapa-kevitra ny hanao izany.
Maimaimpoana mandrakizay ve ny WhatsApp ho an'ny Blackberry?
Azontsika faranana ny Fametrahana WhatsApp ho an'ny BlackBerry. Mitovy amin'ny an'ny sisa amin'ireo sehatra, maimaimpoana mandrakizay ny fampiharana, noho izany, tsy mila manavao ny fisoratana anarana WhatsApp izahay ary tsy ho lany daty mandrakizay, amin'izay afaka mifandray hatrany amin'ireo olon-tiantsika isika. Mora sy haingana be ny fifampiresahana, ary mazava ho azy, afaka mametraka resadresaka ifandraisantsika amin'ireo mpifanerasera amintsika amin'ny fandaharam-potoana izay nametraka WhatsApp tao amin'ny Smartphone, na inona na inona ny marika sy ny rafitra fiasan'izy ireo ampiasainy.